Ministeran’ny Indostria Maro ny asa vita tao anatin’ny iray volana Taorian’ny nahavitan’ny fifamindram-pahefana ny 14 jona 2018 dia niroso avy hatrany amin’ny asa sy fandaminana anatiny ny ministeran’ny indostria sy ny fampiroboroboana ny
Hatavezana tsy ara-dalàna Vokatry ny tsy fahaizana misakafo sy ny tsy fampiasam-batana
Betsaka ireo olona tratry ny hatavezana tsy ara-dalàna amin’izao fotoana na ilay antsoina hoe : « obesité ». Ireo ankizy latsaky ny 18 taona no tena betsaka voan’izy ity noho ny tsy fahaizana misakafo.
Fanomezana tany ny Maorisianina Mangina ny firaisamonim-pirenena
Niteraka resabe ilay fampanofana tany na fanomezana tany 80 Ha ho an’ny Maorisianina any Moramanga any.
Taorian’ny nahavitan’ny fifamindram-pahefana ny 14 jona 2018 dia niroso avy hatrany amin’ny asa sy fandaminana anatiny ny ministeran’ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny minisitra Guy Rivo Randrianarisoa.
Tafapetraka tao anaty fotoana fohy ny kabinetrany. Tsy nokitihiny na novainy kosa anefa ireo mpiasam-panjakana efa niasa tao mba hampidirana « namana » fa ny fitohizana sy fihodinan’ny asa no tarigetrany. Nisy ny fifampiresahana mivantana sy ny fifanakaikezana tamin’ireo mpiara- miasa nampitoviana ny tadin-dokanga amin’ny tanjona tsy maintsy tratrarina sy hanesorana izay mety ahiahy. Ankoatra izay dia efa am-perinasa avokoa amin’izao fotoana izao ireo tale jeneraly vaovao ampiandraiketana ireo sampandraharaha samihafa miankina amin’ny ministera. Tsy niandry ela ny ministra vaovao taorian’ny fanapahana navoakan’ny lehiben’ny governemanta fa avy hatrany dia nanome toromarika hanovana ho takelaka mena (« plaque rouge») avokoa ireo fiaram-panjakana ao amin'ny minisitera. Fampiroboroboana ny indostria sy ny sehatra tsy miankina no fanamby apetraky ny ministera mba ho tena fanoitra ho an’ny fampandrosoana. Tsy nitsahatra nanao fidinana ifotony ny ministra sy ny ekipany. Tao anatin’ny iray volana mahery dia orinasa maro no efa notsidihina. Isan’izany ny orinasa SIRAMA ao Dzamandzar, Nosy Be (zoma 13 jolay) ka nihainoan’ireo tomponandriakitra ao amin’ny inistera ny olana sy fahasahiranan’ireo mpiasa marobe, tsy mandray karama efa antaonany maro. Tany Mahajanga ihany koa ny ekipan’ny ministera nitsidika orinasa maro toy ny “ Ferme Riantsoa » izay miompana amin’ny fiompiana akoho, ny toerana fambolena fary sy hananganana orinasa mpanokatra siramamy ao amin’ny Kaomina ambanivohitra Ambalakida, ny orinasa Pak Foam, manao kidoro vita amin'ny «mousse»… Namangy ny renivohitrin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Farafangana, ihany koa ny ministra Guy Rivo Randrianarisoa nankalaza sy nanokatra ny andro iraisampirenena ho an’ ny kaoperativa. Izany dia hamerenana indray ny hasin’ny kaoperativa mba hivondronan’ny mpamokatra hafahan'izy ireo mifehy ny vidin'ny vokatra ka hahitany tombontsoa.Zava-dehibe ihany koa ny fihaonana sy fifanakalozan-kevitra tamin’ireo orinasa afaka haba. RTT